Rugby vehivavy Malagasy Miara-milalao amn'ireo zanany roa i Tikasosa Nirina
Hakim Abdallah ao amin’ny Barea Mety hiova klioba ivelan’ny Frantsa
Ao anatin'ny heriny tsara i Hakim Abdallah, mpanafika vaovao eo anivon’ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra,
Tena hafakely miseho eo amin'ny tontolon'ny rugby Malagasy tokoa ity toe-javatra iray ity.
fantatra mantsy fa miara-milalao amin'ireo zanany roavavy anatin'ny Makis de Madagascar sokajy vehivavy i Tikasoa Nirina, 38 taona mitana ny toeran'ny "1ère ligne" na "avant" ao amin'ny ekipan'ny JSM Mahamasina ankehitriny. I Prisca zanany iray kosa dia 23 taona ka ny "3/4 aile" no misy azy.
Mbola io toerana io ihany koa ny misy an'i Monica, 20taona, zanany faharoa. Azo lazaina fa efa ao anaty ràn'izy mianakavy ity taranja baolina lavalava ity satria dia mpilalao Rugby tao amin'ny JSTA Ambondrona ihany koa Rakotonindriana Raymond rain'izy roa vavy ireo sady vady andefimandrin-dRtoa Tikasoa Nirina rahateo.